Muscovite sidoo kale loo yaqaan 'mica', isinglass, ama potash mica - Fiidiyow
Iibso muscovite dabiici ah dukaankeena
Muscovite oo sidoo kale loo yaqaan 'mica', isinglass, ama potash mica waa macdanta phyllosilicate macdanta leh aluminium iyo potassium. Waxay leedahay soosaarid heer sare oo heer sare ah oo si fiican u dhalaaysa oo laminae aad u dhuuban oo had iyo goor ah mid aad u deggan.
Muscovite waxay leedahay adkaanta Mohs oo ah 2-2.25 isbarbar dhig wajiga, 4 perpendicular the iyo cufnaanta gaarka ah ee 2.76-3. Waxay noqon kartaa midab la'aan ama la dhalaali karo iyada oo loo marayo grays, bunni, cagaar, jaale, ama viol ama casaan, waxayna noqon kartaa mid hufan ama daah furnaan leh. Waa suuxdin waxayna leedahay bilofring sare. Nidaamkeeda buluuga ah waa monoclinic. Nooc cagaaran, chromium-hodanka ah ayaa loo yaqaan fuchsite; mariposite sidoo kale waa nooc hodan ah oo ah nooca loo yaqaan 'muscovite'.
Muscovite waa mica-ga ugu caansan, oo laga helo granites, pegmatites, gneisses, iyo schists, iyo sida xiriir metamorphic dhagaxa ama macdanta sare oo ka dhalatay isbedelka topaz, feldspar, kyanite, iwm. Xilliga pegmatites, waxaa badanaa laga helaa gudaha go'yaal waaweyn oo ganacsi ahaan qiimo badan. Dhagaxu wuxuu u baahan yahay soo saarista dab-ka-diga iyo alaab ku-celinta oo ilaa xad ahaan uraya.
Magaca muscovite wuxuu ka yimid Muscovy-galaas, magac loo bixiyay macdanta ee Elizabethan England sababtuna tahay isticmaalkeedii Ruushka ee xilligiisu ahaa mid ka rakhiis ah quraaradda muraayadaha. Isticmaalkan ayaa caan ka noqday England qarnigii lix iyo tobanaad markii ugu horreysey ee lagu xuso waraaqo uu soo diray George Turberville, oo ah xog-hayaha safiirka England ee tsar Ivan the Terror, 1568.
Qaybta soo socota waa cilmi saynis oo ku saleysan aaminsanaanta dhaqanka.
Muscovite wuxuu xukumaa sonkorta dhiiga, wuxuu dheelitiraa dheecaanka siilka, wuxuu yareeyaa fuuqbaxa wuxuuna ka hortagaa gaajada inta sooman. Waxay habeysaa kalyaha. Waxay yareysaa hurdo la’aanta iyo xasaasiyada oo waxay bogsiisaa wixii shuruudo ah ee ka yimaada raaxo la'aanta ama isku buuqa.
Dhagaxu wuxuu dhiirigeliyaa jacaylka shuruud la'aanta ah, inaad qalbiga u furtid wadaagida iyo inuu kaa caawiyo inaad aqbasho dadka kale kaamil ahaan. Ficil ahaan, waa dhagaxan aad u fiican haddii aad ku xanuunsato dyspraxia oo aad dhibaato ku qabtid clumisnimada iyo jahwareerka bidix.